Petta Vs Visawasam: Sidee tiyaatarada u qeebsadeen Rajinikanth iyo Ajith Kumar filimadooda – Filimside.net
Petta Vs Visawasam: Sidee tiyaatarada u qeebsadeen Rajinikanth iyo Ajith Kumar filimadooda
Waa arin aan horey loo arkin Superstar Rajinikanth tiyaatarada Tamil Nadu lagula tartamo haatana waxay is hayaan Superstar Ajith Kumar oo qaatay go’aan geesinimo ku dheehan inuu Rajini masraxyada kula tartamo madaama feestada Pongal muhiim tahay qof walbana doonayo inuu daawadayaasha tiyaatarka kusoo jiito.
Haddaba filimada Petta iyo Viswasam wadar ahaan waxay xambaarsan yihiin 200 Crore oo ay kooxda cajaladaha qeybiyaan ku iibsadeen waxaana laga rabaa 375 Crore ganacsi wadar ahaan ah inay soo xareeyaan si ay u noqdaan labo filim oo HIT.
Rajinikanth filimkiisa Petta waxaa maanta la saaray 3155-tiyaatar gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka oo la isku daray halka Ajith Kumar filimkiisa Viswasam la saaray 2010-tiyaatar dibad iyo dal marka la isku daro tiro ahaan.
Filimka Petta ayaa suuqyada caalamka ku xoogan balse gudaha Tamil Nadu waxaa 10% tiro ahaan wax dheer filimka Viswasam oo la saaray 520-shaashad halka Petta la saaray 470-shaashad.
Waa wax la ogyahay in Raijinkanth uu in badan Ajith Kumar ka awood badan kana shacbiyad badan yahay balse Ajith dhawaanahan wax filim ah uma soo bixin taasina waxay keentay in filimkiisa dalab badnaado guaha Tamil Nadu halka Rajini filmkiisa ugu dambeeyay 2.0 weli tiyaatarada qaar uu baaqi ku yahay.
Petta suuqyada caalamka waxaa la saaray 1728-tiyaatar waana filimka sedexaad ee Kollywood sameeyeen tiyaatarada ugu badan daafaha caalamka la saaro waxaana ka sareeyaan 2.0 iyo Kaala oo labaduba Rajini sameeyay.
Ajith Kumar filimkiisa isagaba suuqyada caalamka kuma liito dalab ahaan waxaana la saaray 1094-tiyaatar waana filimka labaad ee Ajith hogaamiye ka yahay ee tiyaatarada la saaro kadib filimkiisii Vivegam oo la daawaday 2017.